Hay?ado daryeel Oo gaaray Caluula iyo maamulka Guardafu soo dhoweeyey ansixintii shalay (Dhegeyso) – Radio Daljir
Luulyo 21, 2013 4:21 b 0
Caluula, July 21- 2013 – Shacabka iyo waxgaradka gobolka Guardafu ayaa si heer sare ah u soo dhoweeyey ansixintii gobolkaasi ee shalayto ay meel-mariyeen baarlamanka Puntland, iyadoo isla wakhtigaasna Dastuurka si rasmi ah loogu furay.
Gudoomiyaha gobolka Guardafu Cali Mire Xasan oo la hadlayey Radio Daljir wuxuu sheegay in gobolkaasi uu yahay mid muhiim u ah bulshada deegaankaas, iyo weliba guud ahaan deeganada Puntland.
Mudane Mire wuxuu intaas ku daray in haatan ay bilaaban doonaan adeegyadii maamulka gobolka iyo waxqabadkii kala duwanaa, isagoo sheegay in dhowaan la keeno doono Gobolka hay?ado iyo wasaarado ka tirsan kuwa maamulka oo halkaas ka howl-geli doona.
Docda kale maamulka gobolka Guardafu waxay xuseen in haatan ay gobolka ku sugan yihiin Hay?ado ka tirsan kuwa gargaarka iyo horumarinta oo halkaas u jooga qorshe xaqiiqo raadin ah, wuxuu guul ku tilmaamay dhamaystirka gobolkaas oo uu sheegay in uu wax weyn ku soo kordhin doono bulshada Puntland.
Dhegeyso Gudoomiyaha gobolka Guardafu oo? u waramay Radio Daljir
Madaxweyne Xasan sheikh Oo iclaamiyey in joogta laga dhigayo mushaarka iyo daryeelka Meleteriga